च्याम्पियन्स लिग::Leading News Portal From Nepal.
बायर्न च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा
काठमाडौं । जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । बुधबार राति समूह ‘बी’ को खेलमा ओलम्पियाकोसलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै बायर्न नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो । पहिलो हाफसम्म...
च्याम्पियन्स लिगको फाइनल अघि केन ठीक होलान् ?
२६ वैशाख, काठमाडौं । टोटनहृयामका फरवार्ड हृयारी केनले च्याम्पियन्स लिगको फाइनल अघि आफू फिट हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राति आयाक्सलाई उसैको घरेलु मैदानमा च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल अन्तर्गत दोस्रो लेगमा ३-२ गोलअन्तरले पराजित...
२६ वैशाख, काठमाडौं । इंग्ल्याण्डको क्लब टोटनह्यामले नेदरल्याण्डको आयाक्सलाई हराएर च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा स्थान बनाएको छ । टोटनह्याम च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको यो पहिलो पटक हो । टोटनह्यामले अब फाइनलमा इंग्ल्याण्डकै क्लब लिभरपुलसँग जुन २...
दोस्रो लेगमा अविश्वसनिय प्रदर्शन गर्दै स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई ४–० ले हराएपछि इंग्लिस क्लब लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको छ । पहिलो लेग ३–० ले गुमाएको लिभरपुलले घरेलु मैदानमा बार्सिलोनामाथि जित निकाल्दै समग्रमा ४–३ गोलअन्तरमा फाइनल...
च्याम्पियन्स लिगः बार्सिलोना र म्यानचेष्टर युनाइटेड भिड्ने
१ चैत, काठमाडौं । च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा बार्सिलोना र म्यानचेष्टर युनाइटेड भिड्ने भएका छन् । शुक्रबार भएको ड्रमा ला लिगा लिडर बार्सिलोनाले युनाइटेड प्रतिद्वन्द्वी पाएको हो । २०११ मा फाइनलमा यि दुई टिम भिडेका...
एट्लेटिको मड्रिडसँग युभेन्टस स्तब्ध
९ फागुन, काठमाडौं । स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडले च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत प्रिक्वारटफाइनलको पहिलो लेगमा जित हात पारेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा घरेलु टोल एट्लेटिको मड्रिडले इटालियन क्लब युभेन्टसलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो ।...
बराबरीमै रोकियो लिभरपुल
च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा इङ्लिस क्लब लिभरपुल जर्मनीको बायर्न म्यूनिखसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ । मंगलबार भएको खेलमा लिभरपुलले जित हासिल गर्ने प्रयास गरेपनि असफल रह्यो। उसले केबल दुई पटकमात्र...